"सहपाठीहरू" मा साथीहरूलाई कसरी थप्न: कदम द्वारा कदम निर्देशन
आज हामी साथीहरूलाई "सहपाठीहरूमा" कसरी थप्नको बारेमा कुरा गर्नेछौं। वास्तवमा, यो धेरै सरल छ, यद्यपि स्थितिको लागि धेरै रोचक विकल्पहरू छन्। हामी तपाईसँग सबै परिस्थितिहरू पूरा गर्नेछौं जुन केवल भेट्न सकिन्छ।
खैर, यदि तपाइँ "सहपाठीहरू" मा साथीहरूलाई कसरी थप्न भन्ने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि पहिलो कुरा हामीले प्रयोगकर्तालाई खोज्न खोज्नु हो। उदाहरणका लागि, सोशल नेटवर्कमा निर्मित इन प्रकार्य प्रयोग गर्नुहोस्। यो गर्न, तपाईंलाई प्राधिकरण मार्फत जानु आवश्यक छ, र त्यसपछि "खोजी" प्यानलमा फेला पार्नुहोस्। रेखामा देखा पर्दछ, हामीलाई भविष्यको साथी खोज्न आवश्यक छ, त्यसपछि उनको प्रोफाईल भ्रमण गर्नुहोस्।
नियमको रूपमा, यो कार्य तपाईंको नयाँ पृष्ठ दर्ता गर्दा प्रस्तुत गरिन्छ। यहाँ तपाईलाई वास्तविक सहपाठीहरू फेला पार्न मौका दिन सकिन्छ, वा पछिल्ला "मित्रता" सँग सोशल सञ्जालमा कम्युनिष्टहरू कल गर्नुहोस्। त्यसैले यो पहिलो तरिका हो जसले तपाईंलाई "सहपाठीहरूमा साथीहरू" कसरी थप्न पत्ता लगाउन मद्दत गर्नेछ। यद्यपि, त्यहाँ केही रोचक विकल्पहरू छन्, जुन हामी अब कुरा गर्नेछौं।
जब तिनीहरू तपाईंलाई सोध्छन्
र यहाँ घटनाहरूको विकासको अर्को संस्करण हो। अब हामी स्थितिको बारेमा कुरा गर्नेछौं जब उनीहरूले तपाईका साथीहरूलाई सामेल गर्न सोध्नुहुन्छ। प्रयोगकर्ताहरूले "सहपाठीहरूमा" साथीहरूलाई अनुप्रयोग छोड्छन्, पुष्टि गर्दछन्, तपाईले तिनीहरूलाई तपाइँको सूचीमा ल्याउनुहुनेछ। तर कसरी यो गर्न सकिन्छ?
सबै भन्दा अधिकृत - प्राधिकरण। यस बिना, तपाईं सामाजिक नेटवर्कको साथ काम गर्न सक्नुहुन्न। अब तपाईंको अलर्टहरू हेर्नुहोस् - त्यहाँ आवश्यक सबै अनुप्रयोगहरू राखिनेछ। प्रत्येकले अर्को प्रयोगकर्ताको अवतार र साथै प्रोफाइलको प्रदर्शन गर्नेछ। Odnoklassniki मा मित्रहरू कसरी थप्न सिक्ने को लागी, तपाइँले मात्र अनुप्रयोग पुष्टि गर्न आवश्यक छ। यस उद्देश्यका लागि, स्वीकृति बटन तिनीहरूमध्ये प्रत्येकमा थपिएको छ। यो भनिन्छ - "मित्रहरूमा थप्नुहोस्।" तपाइँले क्लिक गर्नुभए पछि, व्यक्ति तपाईंको "साथी" को सूचीमा थपिनेछ। जस्तो कि तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, केहि जटिल वा अलौकिक छैन। केही अन्य बिन्दुहरू हेरौं जुन आजको कार्यमा मद्दत गर्न सक्छ।
यदि तपाइँ "सहपाठीहरू" मा धेरै साथीहरू थप्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ विशेष कार्यक्रमहरूको प्रयोगमा सहभागी गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू नियमको रूपमा हुन्, छिट्टै आफैलाई "साथी" हानेर मद्दत गर्न। यो विशेष गरी उपयोगी हुन्छ जब तपाइँ अनुप्रयोगहरू र खेलहरू खेल्दै हुनुहुन्छ जहाँ तपाइँसँग धेरै "छिमेकीहरू" हुनुपर्छ।
एक नियमको रूपमा, शुरू गर्न, हामीले विशेष सामग्री फेला पार्न आवश्यक छ, र त्यसपछि कम्प्युटरमा अपलोड गर्नुहोस्। कार्यक्रम स्थापना गर्नुहोस् र यसलाई चलाउनुहोस्। त्यसपछि मात्र तपाई साथीहरूलाई "सहपाठीहरू" लाई धेरै प्रयोगकर्ताहरू कसरी थप्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे सोच्न सक्नुहुन्छ।
सामान्यतया स्थापना पछि तपाईलाई एक प्रकारको प्राधिकरणको माध्यम ले जान आवश्यक छ। उपयुक्त सन्झ्यालमा सामाजिक नेटवर्कबाट लग इन र पासवर्ड प्रविष्टि गर्नुहोस्, र त्यसपछि कार्यक्रममा उपलब्ध सबै कार्यहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यद्यपि, त्यहाँ एक रोचक प्रश्न छ कि ओडेनोक्यागिनिकी सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले सोध्छन्: "तपाइँले थप सामग्रीको सहयोगमा कति मित्रहरू थप्न सक्नुहुन्छ?" एक नियमको रूपमा, एक पटक त्यहाँ5000 नयाँ प्रयोगकर्ताहरू "सामेल" गर्ने सम्भावना छ। छिटो र रोचक पद्धति छ जुन तपाईंको चाँडो आफ्नो प्रोफाइल धेरै लोकप्रिय बनाउन मद्दत गर्नेछ। ठीक छ, यस चरणमा केही कमजोरीहरू छन्। उदाहरणको लागि, यदि तपाई गलत प्रोग्राम डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने तपाइँ ह्याक गर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरक्षित सामग्री खोज्नुहोस् धेरै गाह्रो छ। यद्यपि, यदि तपाई अझै अझै "Odnoklassniki" मा धेरै साथीहरू कसरी थप्न भन्ने बारे सोच्नुहुन्छ भने, तपाइँ एक थप रोचक चाल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
अब केहि उन्नत प्रयोगकर्ताहरूले कहिलेकाँही यो चाल प्रयोग गर्दछ, जस्तै धोखाधडी साथीहरूलाई सामाजिक नेटवर्कमा। यो, एक नियमको रूपमा, जो प्रोग्रामिंग कुशलता भएका व्यक्तिहरु द्वारा गरिन्छ।
सामान्यतया तपाईंले विश्वभरको वेबमा लगभग "हरेक" सहपाठीहरूमा धोखा दिने साथीहरूको लागि समान सुझावहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई प्रोग्रामरसँग सम्पर्क गर्न आवश्यक छ, सबैसँग उनीहरूको न्युनियन्सहरू (कति र कुन प्रयोगकर्ताहरू थप्नका लागि) छलफल गर्ने, एक मूल्य निर्धारण, र त्यसपछि शुल्क तिर्नुहोस्। यसबाहेक, यदि तपाईं जान्न चाहनुहुन्छ कि साथीहरूलाई कसरी "धोखाधडी" मा धोखाको सहयोगको साथमा, प्रोग्रामरलाई तपाईंको प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड बताउनुहोस्। त्यस पछि, निष्पादनको लागि सहमत समयमा, नतिजा हेर्नुहोस्। ईमानदारीपूर्वक, यस चाललाई विश्वास गर्न सकिँदैन। प्राय: प्रोग्रामरहरूले ह्याकरहरू लुकाउँछन् जसले आफ्नै उद्देश्यका लागि खाता चोरी गर्छन्। त्यसैले कार्यक्रमहरूको विकासको उचित संस्करणहरू प्रयोग गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
रिमोट पहुँच कन्फिगर कसरी गर्ने?
सामाजिक सञ्जालहरूमा साथीहरूको लागि नोटहरू
एक जनाको लागि उपनाम: छनौटमा रोचक विचारहरू र सल्लाह
"VC" मा नाम परिवर्तन कसरी गर्ने? नाम सम्पादन, पृष्ठको उपनाम र ठेगाना
कसरी अदृश्य "VKontakte"?3प्रभावकारी तरिकाहरू
कीव मा Askold गरेको लास को इतिहास। Askold गरेको गम्भीर मा सेन्ट निकोलस को चर्च
ग्राफिक ट्याब्लेट वाकोम बांसो। लक्षण, वर्णन, मूल्यहरू
राशि तुला। महिला। वर्ण
"डोनट" नै एक बन्डल कसरी बनाउने?
फ्रान्स क्षेत्र: लयर उपत्यका
गर्भनिरोधक 'Marvelon'। समीक्षा
को भित्री कोठा मा सजावटी विभाजन
को होंडा सिविक हाइब्रिड को अमेरिकाको यात्रा